Home YURUB IYO YURUB Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Weyn
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubadda cagta ee ugu wanaagsan ee loo yaqaan magaca "Kyle". Dabeecadeena Kyle Walker-Petershood-Petersen iyo Wacdiyooyinka aan la Xidhiidha Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, taariikhda qoyska, sheekada nolosha ka hor caan ka ah, kor u qaadida sheekada caanka ah, xiriirka iyo nolosha qofka.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu yahay ciyaaryahan leh awooda weyn mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, dhowr qof oo keliya ayaa ka fikiraya Kyle Walker-Peters 'Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Wadanin ah- Hore iyo Taariikhda Qoyska
Bilaabista, magaciisa oo dhan waa Kyle Leonardus Walker-Peters. Waxa uu ku dhashay maalinta 13th April ee April 1997 hooyadiis, Mary Walker-Peters iyo aabe, Dennis Walker-Peters oo ku yaal degaanka Greater London ee Edmonton, United Kingdom.
Kyle wuxuu ku dhashay qowmiyada Black British ah kaas oo maamula asal ahaan qaraabada qoysaska. Sida laga soo xigtay warbixinnada internetka, asalkiisa qoyskiisa waxaa laga heli karaa Jamaica.
Kyle wuxuu ku koray wiil yar oo xasilloon, oo ah aalad uu ka dhaxlay aabihiis, Dennis. Labada waalidba, Dennis iyo Mary waxay caado u yihiin inay ilaaliyaan wiilkooda iyo hubinta inuu raaco waddada saxda ah, oo ay ka mid tahay inuu helo waxbarasho.
Kyle Walker oo ka soo kicitimay Tottenham, ayaa qoyskiisa waxa ay taageereen taageerayaal badan oo Arsenal ah, marka laga reebo isaga iyo saaxiibo badan oo taageera Tottenham.
Go'aanka Kyle Walker-Peters ee ah inuu noqdo qof xirfadle ah ayaa ka yimid adeerkiis, Philip Leonardus Walker oo ahaa ciyaaryahankii hore ee xirfadlayaasha ahaa ee Millwall iyo Charlton Athletic.
Hoyga 60 ee xilligii la qorayay, Phillip oo markii dambe noqday macalinka kubada cagta ayaa dhiirrigeliyay wiilkii adeerka ahaa ee Kyle inuu ka qaybqaato dhaqdhaqaaqyada kubada cagta sida ilmo. Markii uu helay xiisaha kubadda cagta, Philip wuxuu hubiyay in uu adeerkiisa yaraa uu raacay waddo wanaagsan isaga oo raadsaday taageerada buuxda ee waalidkiis oo ku raacay xaalad ah in wiilkoodu uusan wax u dhimeynin waxbarashadiisa tababarka kubada cagta.
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Wadanin ah- Nolosha Mudnaanta Hore
Jacaylka Kyle ee kubada cagta wuxuu arkay isaga oo diiwaangashan islamarkaana maxkamad ku guuleystay Spurs isagoo ahaa ciyaaryahanka khadka dhexe. Kyle ma uusan ku biirin Tottenham hadii uusan caawinaad ka helin adeerkiis adeerkiis Bryan King kaasoo ahaa goolhayihii hore iyo saaxiibkiisii ​​hore ee Millwall. Bryan oo hadda 71 (sida wakhtiga qorista) wuxuu ahaa kormeere Spurs xilligaas oo Kyle Walker-Peters la caawiyay.
Markii Kyle uu ku soo bilowday Tottenham, looma qiimeeynin mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican da'diisa. Si kastaba ha ahaatee, nolosha Tottenham ee akadeemiyada Tottenham ayaa markii ugu horeysay ku raaxeysay. Intaas ka dib, Kyle wuxuu arkay inuu sameeyay waxyaabo fara badan. Waxaa jiray marar uu lahaa inuu noqdo mid kaliya oo la helay oo la waayey xafladaha dhalashada. Kyle Walker-Peters ayaa si kastaba loola socdaa noloshiisa sababtoo ah wuxuu dareemay inuu sameynayo waxa uu jecel yahay; taasi waa "Kubadda cagta."
Maamulida noloshiisa hore ee Spurs:
Qof kale oo maamula noloshiisa, Walker-Peters waa inuu ku noolaadaa digsiyada saaxiibka martida loo yahay. Waxa uu deganaa Milos Veljkovic, oo ah ciyaaryahan reer Serbia ah oo la ciyaaraya Werder Bremen xilli ciyaareedkii hore.
"Joogitaanka Milos Veljkovic wuxuu iga caawiyay inaan madax banaanaado. Waxaan u baahday inaan sameeyo oo aan sameeyo iskii u shaqeynaayo oo aan wax kariyo quraacadayda. Waayo-aragnimadaa sidan oo kale ah. " ayuu yidhi Kyle Walker-Peters
Inkasta oo Kyle uu sii waday da'da da 'da, ayaa waalidkiis sii waday inuu barto waxbarashada isaga oo hubinaya in uu dhameystiray heerka. Sida laga soo xigtay Kyle ...
"Waxaan diiradda saarey waxbarashada inta aan ciyaarayo kubada cagta illaa aan ka gaaray da'da 16. Waxaan hubiyay inaan helay dhibco fiican. Ka dib, waxaan awoodey inaan kaliya diirada saaro kubadeyda, dhab ahaantii way i caawisay. "
Ka dib waxbarashadiisa, waxa ay ahayd waqtigii Kyle uu u dagaalami lahaa inuu ku biiro heshiis qibrad leh Tottenham. Tani waxay soo bandhigtay cutub cusub oo ku saabsan noloshiisa xirfadeed.
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Wadanin ah- Waddada Weyn
Qaadashadiisu waxay noqotaa mid adag:
Waxa ay noqotay mid halis ah in xitaa Kyle Walker-Peter qolkiisa Miloš Veljković waxaa loo sameeyay inuu ka horyimaado isaga iyo ciyaartoy kale oo ka tirsan kooxda dhalinyarada Spurs. Waxaa jiray ciyaartoy badan oo ciyaara isla boos kaas oo soo bandhigay lacag dheeri ah oo ku aadan baahida Spurs. Sidaa awgeed, tartanka waxa uu noqday mid muhiim u ah gudaha kooxda Spurs Academy.
"Waxaan isku dayayaa inaan horumar ku sameeyo qaab ciyaareedkeyga oo ahaa qaabkii aan ku heli lahaa ciyaartoyda kale ee aan booska ka maqnaado kooxda. Aabahay ayaa ahaa saameyn weyn. Wuxuu had iyo jeer odhan lahaa, 'saaxiibo kubada cagta ah ma lihid saaxiibtinimo, laakiin waligaa waligaa ma lahan saaxiibo'. Laga soo bilaabo xilligaas, waxaan garwaaqsaday in aan ku kalsoonaan lahaa. " ayuu yidhi Kyle Walker-Peters oo ku yaala FourFourTwo Warbixinta.
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Wadanin ah- Kusoo caan bax
Kyle Walker-Peters, waxa uu si toos ah u kordhay isaga oo u horseedaya aqoonsi caalami ah oo la yiraahdo Under-18s iyo Under-19s.
Wuxuu ogyahay sida wax looga qabto xitaa xaaladaha adag ee cadaadiska joogtada ah ee ugu sarreeya ee kubadiisa oo dhan oo dhan magaca qandaraas xirfadeed.
Mustaqbalka Walker-Peters si uu u helo qandaraas xirfad leh, qof shakhsi ah oo uu waligiis weli ku faraxsan yahay ma ahan mid kale oo ka dambeeya Ugo Ehiogu oo ahaa tababaraha kooxda Tottenham Hotspur U23. Ehiogu wuxuu ku geeriyooday 21st ee April 2017 ka dib markii uu soo gaaray xanuun wadnaha ah oo lagu qabtay xerada Spurs.
Bishii kaddib markii uu geeriyooday, tartanka U20 World Cup ayaa soo wacay oo Kyle Walker-Peters loo doortay inuu matalo England. Isagoo la wadaagaya saaxiibadiisa Chelsea Callum Hudson-Odio wuxuu caawiyay England si uu u xaqiijiyo Koobka Aduunka ee 20s.
Wareegtadii uu qaaday U20 World Cup, Walker-Peters ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aan macquul ahayn kooxda akadeemigeeda. Iyadoo Kieran Trippier maaraynta dhibaatada gumaarka iyo Serge Aurier sidoo kale dhaawaca soo gaaray, Walker-Peters ayaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican booskaas. Ugu dambeyntii, Mauricio Pochettino wuxuu riyadiisa u muujiyay sida uu ugu yeeray Walker-Peters inuu saxiixo qandaraaskiisa qandaraas dheer oo uu la leeyahay kooxda Tottenham.
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Wadanin ah- Nolosha Xiriirka
Yuu yahay Kyle Walker-Peters girlfriend?
Kyle Walker-Peters waa mid ka mid ah ciyaartoydeeda oo sawiradooda ka cararaya indhaha dadweynaha oo dhan, sababtoo ah waxay tahay mid gaar ah ama laga yaabo inaysan jirin waqtigan. Keliya ciyaartoy dhalinyaro ah oo Ingiriis ah ayaa leh cilaaqaadkooda oo aad u daneynaya. Tusaale fiican ayaa ah Declan Rice.
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Wadanin ah- Naftaada Shaqsiga
Helitaanka in aad ogaato Kyle Walker-Peters nolosha qofka ayaa kaa caawin kara inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah.
Bixinta inuu yahay mid ku filan ayaa soo koobay sheekada Walker-Peters. Tani waxay ku jirtaa dhinac shaqo. Si kastaba ha ahaatee, qoraalka shakhsi ahaaneed, Walker-Peters ayaa xaqiijiyay in uu ku filan yahay qoob ka ciyaarista PlayStation.
Kyle Walter-Peters kaliya ma ciyaaro ciyaaraha kubbadda cagta ama fiidiyowga. Waxa uu ku faraxsan yahay cayaaraha xamaasad qaadka ah kaas oo ay la wadaagaan saaxiibadiisa Spurs iyo shaqaalaheeda booqashada waxayna bixiyaan caawimaad aan loo dulqaadan karin.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta nooceeda Kyle Walker-Peters Story-da iyo xaqiiqooyinka looyaqaano. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Ben Davies Cartheel Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha aan la Ogeyn
Harry Winks Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Moussa Sissoko Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Kieran Trippier Storyhood Plus Sheeko Xaqiiqo Weyn
Danny Rose Story Story Plus Xogta Warka Xogta
Victor Wanyama Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xaddidan
Peter Crouch Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha